အထငျကွီးစသေညျ့ နံပါတျ ၉ စဈစဈကိုမွငျခဲ့ရသညျ့ ပွငျသဈ 7-8 ဆှဈ ပှဲပွီး မှတျမှတျရရ ပွောစရာ ၇ ခကျြ – Sports A2Z
အထငျကွီးစသေညျ့ နံပါတျ ၉ စဈစဈကိုမွငျခဲ့ရသညျ့ ပွငျသဈ 7-8 ဆှဈ ပှဲပွီး မှတျမှတျရရ ပွောစရာ ၇ ခကျြ
ပွငျသဈအသငျးဟာ ယူရို ၂၀၂၀ ရဲ့ (၁၆)သငျး ရှုံးထှကျအဆငျ့မှာ ဆှဈဇာလနျအသငျးနှငျ့တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး မိနဈ(၉၀)အတှငျး သုံးဂိုးစီသရကေနြခေဲ့ရာ အခြိနျပိုအတှငျးမှာလညျး သရကေနြပွေီး ပငျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံယူရာမှာတော့ (၄-၅)နဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး စောစောစီးစီးလကျပွနှုတျဆကျခဲ့ရပါတယျ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအသငျးမှာ ပေါ့ဂျဘာ ကနျတေ ဂရိဇျမနျး ဂရြူး ဗာရနျး တို့လို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကစားသမားတှေ ရှိနပေါလကျြနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပွောစရာဖွဈခဲ့တဲ့ အခကျြ(၇)ခကျြကို ကောကျနုတျထားပါတယျ
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ (၅)နှဈတုနျးက လှဲခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံဆုကိုယူဖို့ ပဈမှတျထားခဲ့ကွတာပါ။ သမေငျးတမနျအုပျစုထဲ ကရြောကျခဲ့ရပွီး အုပျစုဗိုလျအနနေဲ့ ရှုံးထှကျအဆငျ့ကို တကျလာခဲ့ပမေယျ့ (၁)ပှဲနိုငျ(၂)ပှဲသရဆေိုတဲ့တညျငွိမျမှုမရှိတဲ့ပုံစံကိုပွသနခေဲ့တာပါ။ ပထမပိုငျးမှာ ဦးဆောငျဂိုးပေးခဲ့ရပမေယျ့ ဒုတိယပိုငျးစစခငျြး မိနဈ(၃၀) အတှငျးမှာ (၃)ဂိုးသှငျးယူထားခဲ့ပွီး အနိုငျရပွီလို့ ယူဆထားခဲ့ရတာပါ။ ဂရိဇျမနျး ဘာပေ ဘနျဇီမာ တို့ရဲ့ တိုကျစဈဟာ ဒီပှဲမှာတော့ အားရစရာရှိခဲ့ပွီး လြော့တိလြော့ရဲ ခံစဈကွောငျ့သာမဟုတျရငျ နောကျတဈဆငျ့တကျခဲ့ရမှာပါ။
မထငျမှတျတာ လုပျပွခဲ့တဲ့ လြှော့တှကျခံ ဆှဈဇာလနျ
ဆှဈဇာလနျမှာလညျး ကစားသမားကောငျးတှေ ရှိပမေယျ့ ပွိုငျပှဲရဲ့ ဖကျြမဉျြးအဆငျ့သာ သတျမှတျထားခဲ့ကွတာပါ။ ကစားသမားကောငျးတှရှေိပမေယျ့ ပွငျသဈလို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကစားသမားတှနေဲ့ တှတေဲ့အခါ လြှော့တှကျခံခဲ့ရပွီး ပှဲကတော့ ဘောလုံးပှဲတှရေဲ့ ရသကို အပွညျ့အဝပေးခဲ့ပါတယျ။ ဟနျဂရေီကို ရှုံးပှဲကွုံတှတေ့ော့မလိုဖွဈခဲ့တဲ့ ဂြာမနီအသငျးလညျး ယူရို ၂၀၂၀ မှာရှိခဲ့သလို ခကျြအသငျးက ဒတျချတြို့ကို အံ့အားသငျ့ဖှယျ နှဈဂိုးပွတျအနိုငျယူခဲ့တာနဲ့တော့ ဒီပှဲက အနညျးငယျကှဲပွားပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အဆငျ့တှကေ ဒီပွိုငျပှဲမှာ အရေးမကွီးဘူးဆိုတာကို ပွနတောလား….
ဘနျဇီမာရဲ့ဂိုးတှကေ စိတျပကျြစရာပွငျသဈအတှကျ မလုံလောကျခဲ့
နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးနဲ့(၆)နှဈကွာဝေးကှာခဲ့တဲ့ ဘနျဇီမာအနနေဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ သှငျးဂိုး(၄)ဂိုးအထိ ရယူပေးထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပျေါတူဂီအသငျးနဲ့ နှဈဂိုးစီသရကေခြဲ့စဉျမှာလညျး သူ့သှငျးဂိုးတှနေဲ့ပဲ သရကေခြဲ့သလို ယခုပှဲမှာလညျး (၃၃)နှဈသားတိုကျစဈမှူးအနနေဲ့ ခပြေဂိုးနဲ့ဦးဆောငျဂိုးကို သှငျးယူပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ မိနဈ(၈၀)ကြျောမှ ခပြေဂိုးတှေ ပွနျပေးခဲ့ရတာက အဆိုပါပွငျသဈသားအတှကျ စိတျပကျြစရာဖွဈခဲ့ပွီး အခြိနျပိုပထမပိုငျးမှာတငျ ကွှကျသားဒဏျရာကွောငျ့ လူစားလဲခံလိုကျရပါတယျ။
ပွငျသဈက ပေါ့ဂျဘာရဲ့ခွစှေမျးက မနျယူအထိပါလာလမေလား
ပေါ့ဂျဘာကတော့ ဆှဈဇာလနျအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ကှငျးလယျတဝိုကျ ခွစှေမျးပွကစားနိုငျခဲ့ပွီး လှပတဲ့ ဂိုးတဈဂိုးကိုပါ သှငျးယူခဲ့ပါသေးတယျ။ ပွငျသဈအသငျးရဲ့ သှငျးဂိုးတှအေတှကျ ကှငျးလယျမှာ ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ဖနျတီးပေးမှုတှကေိုသာ တိုကျစဈက အသုံးခနြိုငျခဲ့ရငျ ဂိုးဖနျတီးမှု (၂)ကွိမျထိ ရလာနိုငျတာလညျးဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ စှမျးရညျတှကွေောငျ့ပဲ မနျယူက ချေါယူခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ အဲ့မှာ ခွစှေမျးပြောကျဆုံးနခေဲ့ပွီး နိုငျငံအသငျးမှာပဲ ဘာလို့ ခွစှေမျးပွနသေလဲဆိုတာ မေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ပွငျသဈအသငျးအတှကျ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ခွစှေမျးအတောကျပဆုံးလို့တောငျ ပွောလို့ရတဲ့အထိ ခွစှေမျးပွသနရေငျ အဲ့ပုံစံကို မနျယူမှာ ဘာလို့မပွနိုငျရမှာလဲဆိုတာ စဉျးစားစရာပါ။
ဘာပကေို ရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီတို့ရဲ့ ခတျေအလှနျမှာ အစားထိုးမယျ့ ကွယျပှငျ့လို့ အမြားစုက မှတျယူထားခဲ့ကွတာပါ။
သူဟာ ပွငျသဈအသငျးရဲ့ ယူရိုပွိုငျပှဲတလြှောကျ ခွစှေမျးမပွနိုငျတဲ့ ကစားသမားအမြားစုထဲက တဈယောကျဖွဈပွီး အဆုံးအဖွတျပငျနယျတီအပါအဝငျ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ သှငျးဂိုးတဈဂိုးမှမရရှိခဲ့တဲ့ထိ ပုံမှနျခွပြေောကျဆုံးနခေဲ့တာပါ။ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ ဂိုးသှငျးခှငျ့အမွောကျအမွားကို ဖွုနျးတီးခဲ့တာကို ဖယျထားရငျတောငျ အဆုံးအဖွတျပငျနယျတီ မဝငျခဲ့ဘဲ အသငျးလညျး အရေးနိမျ့ပွီးပွိုငျပှဲကို လကျပွနှုတျဆကျခဲ့ရပါတယျ။
နံပါတျ(၉)စဈစဈဖွဈရခွငျးရဲ့ အနုပညာက နံပါတျ(၉)စဈစဈတှေ ပြောကျဆုံးသလောကျဖွဈနတေဲ့ခတျေမှာတော့ အဖိုးတနျပါတယျ။ ဆှဈဇာလနျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကစားသမား ဆယျဖရိုဗဈဟာ အဲ့လိုကစားသမားဖွဈပွီး ဆှဈဇာလနျအသငျးအတှကျ သှငျးဂိုး(၂၄)ဂိုးရှိလာပွီဖွဈပါတယျ။ အဖှငျ့ဂိုးကို လနျဂလကျအနားကနေ ခှါပွီး တံတောငျနဲ့ အနညျးငယျတှနျးကာ ခေါငျးတိုကျခှငျ့ရယူပွီး သှငျးယူခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယဂိုးကိုလညျး ပထမဂိုးလိုပဲနရောယူကာ သှငျးခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲကွီးတှမှော ကစားသမားရှာဖှကွေတဲ့ အသငျးတှရေဲ့ ရဒေါထဲ ရောကျနလေောကျပွီး မှနျကနျတဲ့ရှေးခယျြမှု လုပျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ရပါမယျ။
စကျတငျဘာ ၂၀၂၀ နောကျပိုငျး ပထမဆုံးအနနေဲ့ ဒေးရှမျးဟာ နောကျတနျး (၃)ယောကျတနျးကို အသုံးပွုခဲ့ပွီး ဒဈဂျနေးရဲ့ မပါဝငျနိုငျမှုကွောငျ့ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဗာရနျး – ကငျဘမျပေ အတှဲရဲ့အလယျမှာ လနျဂလကျကို ထညျ့သှငျးခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ အားနညျးမှုကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီး ဦးဆောငျဂိုးပေးခဲ့လိုကျရပါတယျ။ ဘယျတောငျပံဆော့နကွေမဟုတျတဲ့ ရာဘီယော့လညျး ရုနျးကနျခဲ့ရပွီး မိနဈ(၄၀) လောကျအထိ ရုပျပကျြဆငျးပကျြဆိုးရှားခဲ့တာပါ။အာရုံစူးစိုကျမှုလြော့နညျးခဲ့တဲ့အတှကျ အာရုံစူးစိုကျမှုအပွညျ့နဲ့ ဆှဈဇာလနျကပဲ လိုအပျတဲ့ရလဒျကို အရယူသှားနိုငျခဲ့ပွီး ‌ပွငျသဈအသငျးရဲ့ နညျးဗြူဟာ ကမောကျကမတှေ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
ပြင်သစ်အသင်းဟာ ယူရို ၂၀၂၀ ရဲ့ (၁၆)သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မိနစ်(၉၀)အတွင်း သုံးဂိုးစီသရေကျနေခဲ့ရာ အချိန်ပိုအတွင်းမှာလည်း သရေကျနေပြီး ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံယူရာမှာတော့ (၄-၅)နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး စောစောစီးစီးလက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအသင်းမှာ ပေါ့ဂ်ဘာ ကန်တေ ဂရိဇ်မန်း ဂျရူး ဗာရန်း တို့လို ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေ ရှိနေပါလျက်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက်(၇)ချက်ကို ကောက်နုတ်ထားပါတယ်
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်တုန်းက လွဲခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံဆုကိုယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာပါ။ သေမင်းတမန်အုပ်စုထဲ ကျရောက်ခဲ့ရပြီး အုပ်စုဗိုလ်အနေနဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်ကို တက်လာခဲ့ပေမယ့် (၁)ပွဲနိုင်(၂)ပွဲသရေဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုံစံကိုပြသနေခဲ့တာပါ။ ပထမပိုင်းမှာ ဦးဆောင်ဂိုးပေးခဲ့ရပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းစစချင်း မိနစ်(၃၀) အတွင်းမှာ (၃)ဂိုးသွင်းယူထားခဲ့ပြီး အနိုင်ရပြီလို့ ယူဆထားခဲ့ရတာပါ။ ဂရိဇ်မန်း ဘာပေ ဘန်ဇီမာ တို့ရဲ့ တိုက်စစ်ဟာ ဒီပွဲမှာတော့ အားရစရာရှိခဲ့ပြီး လျော့တိလျော့ရဲ ခံစစ်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင် နောက်တစ်ဆင့်တက်ခဲ့ရမှာပါ။
မထင်မှတ်တာ လုပ်ပြခဲ့တဲ့ လျှော့တွက်ခံ ဆွစ်ဇာလန်
ဆွစ်ဇာလန်မှာလည်း ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိပေမယ့် ပြိုင်ပွဲရဲ့ ဖျက်မျဉ်းအဆင့်သာ သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာပါ။ ကစားသမားကောင်းတွေရှိပေမယ့် ပြင်သစ်လို ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ လျှော့တွက်ခံခဲ့ရပြီး ပွဲကတော့ ဘောလုံးပွဲတွေရဲ့ ရသကို အပြည့်အဝပေးခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ဂေရီကို ရှုံးပွဲကြုံတွေ့တော့မလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျာမနီအသင်းလည်း ယူရို ၂၀၂၀ မှာရှိခဲ့သလို ချက်အသင်းက ဒတ်ခ်ျတို့ကို အံ့အားသင့်ဖွယ် နှစ်ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူခဲ့တာနဲ့တော့ ဒီပွဲက အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်တွေက ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အရေးမကြီးဘူးဆိုတာကို ပြနေတာလား….
ဘန်ဇီမာရဲ့ဂိုးတွေက စိတ်ပျက်စရာပြင်သစ်အတွက် မလုံလောက်ခဲ့
နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့(၆)နှစ်ကြာဝေးကွာခဲ့တဲ့ ဘန်ဇီမာအနေနဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ သွင်းဂိုး(၄)ဂိုးအထိ ရယူပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ နှစ်ဂိုးစီသရေကျခဲ့စဉ်မှာလည်း သူ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့ပဲ သရေကျခဲ့သလို ယခုပွဲမှာလည်း (၃၃)နှစ်သားတိုက်စစ်မှူးအနေနဲ့ ချေပဂိုးနဲ့ဦးဆောင်ဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ မိနစ်(၈၀)ကျော်မှ ချေပဂိုးတွေ ပြန်ပေးခဲ့ရတာက အဆိုပါပြင်သစ်သားအတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီး အချိန်ပိုပထမပိုင်းမှာတင် ကြွက်သားဒဏ်ရာကြောင့် လူစားလဲခံလိုက်ရပါတယ်။
ပြင်သစ်က ပေါ့ဂ်ဘာရဲ့ခြေစွမ်းက မန်ယူအထိပါလာလေမလား
ပေါ့ဂ်ဘာကတော့ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ကွင်းလယ်တဝိုက် ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီး လှပတဲ့ ဂိုးတစ်ဂိုးကိုပါ သွင်းယူခဲ့ပါသေးတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ သွင်းဂိုးတွေအတွက် ကွင်းလယ်မှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုတွေကိုသာ တိုက်စစ်က အသုံးချနိုင်ခဲ့ရင် ဂိုးဖန်တီးမှု (၂)ကြိမ်ထိ ရလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စွမ်းရည်တွေကြောင့်ပဲ မန်ယူက ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အဲ့မှာ ခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီး နိုင်ငံအသင်းမှာပဲ ဘာလို့ ခြေစွမ်းပြနေသလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းအတွက် ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ခြေစွမ်းအတောက်ပဆုံးလို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့အထိ ခြေစွမ်းပြသနေရင် အဲ့ပုံစံကို မန်ယူမှာ ဘာလို့မပြနိုင်ရမှာလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။
ဘာပေကို ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ရဲ့ ခေတ်အလွန်မှာ အစားထိုးမယ့် ကြယ်ပွင့်လို့ အများစုက မှတ်ယူထားခဲ့ကြတာပါ။
သူဟာ ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ ယူရိုပြိုင်ပွဲတလျှောက် ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ ကစားသမားအများစုထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ပင်နယ်တီအပါအဝင် ယူရို ၂၀၂၀ မှာ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးမှမရရှိခဲ့တဲ့ထိ ပုံမှန်ခြေပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာပါ။ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် ဂိုးသွင်းခွင့်အမြောက်အမြားကို ဖြုန်းတီးခဲ့တာကို ဖယ်ထားရင်တောင် အဆုံးအဖြတ်ပင်နယ်တီ မဝင်ခဲ့ဘဲ အသင်းလည်း အရေးနိမ့်ပြီးပြိုင်ပွဲကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။
နံပါတ်(၉)စစ်စစ်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အနုပညာက နံပါတ်(၉)စစ်စစ်တွေ ပျောက်ဆုံးသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်မှာတော့ အဖိုးတန်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမား ဆယ်ဖရိုဗစ်ဟာ အဲ့လိုကစားသမားဖြစ်ပြီး ဆွစ်ဇာလန်အသင်းအတွက် သွင်းဂိုး(၂၄)ဂိုးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဖွင့်ဂိုးကို လန်ဂလက်အနားကနေ ခွါပြီး တံတောင်နဲ့ အနည်းငယ်တွန်းကာ ခေါင်းတိုက်ခွင့်ရယူပြီး သွင်းယူခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယဂိုးကိုလည်း ပထမဂိုးလိုပဲနေရာယူကာ သွင်းခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ ကစားသမားရှာဖွေကြတဲ့ အသင်းတွေရဲ့ ရေဒါထဲ ရောက်နေလောက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှု လုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရပါမယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒေးရွှမ်းဟာ နောက်တန်း (၃)ယောက်တန်းကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဒစ်ဂ်နေးရဲ့ မပါဝင်နိုင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဗာရန်း – ကင်ဘမ်ပေ အတွဲရဲ့အလယ်မှာ လန်ဂလက်ကို ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ အားနည်းမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဦးဆောင်ဂိုးပေးခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်တောင်ပံဆော့နေကြမဟုတ်တဲ့ ရာဘီယော့လည်း ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး မိနစ်(၄၀) လောက်အထိ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဆိုးရွားခဲ့တာပါ။အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းခဲ့တဲ့အတွက် အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ကပဲ လိုအပ်တဲ့ရလဒ်ကို အရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီး ‌ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ နည်းဗျူဟာ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
နိုငျငံအတှကျ အောငျမွငျမှု ဆာလောငျနဆေဲ ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ခံစားခကျြ